Diinta yaa afduubtay? – Kaasho Maanka
Diintii Maxamed oo la afduubay ayaa ‘Sunni’ lagu magacaabay. Dhimashadii Maxamed kadib, Abuu Bakar ayaa afduubay qoyskii iyo qaraabaddii Maxamed. Abuu Bakar dabadii ninba nin dool ah ayuu usii dhiibay xukunka, waana la fogeeyay qoyskii iyo qaraabadii Maxamed, illaa Cali Bin Abii Dhaalib iyo Caa’isha oo xaaskii Nabiga ahayd ay dagaal foodda is dareen ayaga oo kala ah laba Islaam oo kala duwan. Qolo wax afduubtay iyo qolo afduubka ka dhiidhisay. Dagaalkaasi kadib waa la joojiyay in la isku magacaabo ‘khulafo’ arrintuna waxa ay noqotay mid si fiican u dhabaqlaysa, nin walbana halka uu kasoo gaaro ayuu ka taliyay (amiireeyay). Sidii ayay illaa maanta ku socotaa arrintu, marka aynu joogno sooyaalka Sunniga. Dad badan ayaa qaba in Bukhaari uusan waligii muslim noqon, balse uu ka faa’iidaystay isbar-baryaaca sidaas daraadeedna uu afduubka ka qaatay qeybtiisa asaga oo noqday ninka loo daba fariisto falkinta axaadiista iyo jihaynta dadkii afduubnaa ee isku arkayay in ay wado saxan ku socdeen.
Tan iyo maanta kala-sarreyn kama dhex jirto Sunniga, balse waa jaantaa rogan, kii maanta ashahaatana beriba waxa uu noqon karaa hogaamiye horbooda Sunniga, halkaas ayuuna kasii wadaa afduub diimeedkii socday ee la magac baxay ‘Sunni’. Haddii aysan afbuubkaasi iyo dhabaqlayntaasi jiri lahayn, ma dhici lahayn in uu Abuu Bakar Al Baghdadi – waa hogaamiyaha Daacish e – oo shalay ahaa maxbuus Maraykan uu maanta noqdo hogaamiyaha Sunniga sida ay dad badani oo Sunni ah u arkaan. Sidoo kale, Osama Bin Laden iyo Ina Godane waxa ay ka faa’iidaysteen isbar-baryaaca iyo dhabaqlaynta qaab dhismeedka Sunniga.
Diimaha kale ee jira dhamaantood waxa ay ka simanyihiin in ay leeyihiin kala-sarreyn aanan marnaba suuragelinayn in mid dool ihi inta uu soo dhexgalo, deetana uu hogaanka u qabto diintii. Sidaasi si la mid ah, Shiicada ayaa leh nidaam kala-sarreyn leh oo aanan lagu dhex walaaqan karin.
W/Q: Gallad Gurxan 27th October 2019